ब्वायफ्रेण्डसँग मासिक १ करोडभन्दा धेरै तलब लिने गर्लफ्रेण्ड, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
ब्वायफ्रेण्डसँग मासिक १ करोडभन्दा धेरै तलब लिने गर्लफ्रेण्ड, को हुन् उनि ?
काठमाडौं। चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई विश्वकै धनी खेलाडीमा गनिन्छ। खेलकुदबाहेक उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका कारण पनि चर्चामा रहन्छन्। यसपटक उनी फेरी गर्लफ्रेन्ड जर्जिना रोड्रिग्वेजको कारण चर्चामा छन्।
एक रिपोर्टका अनुसार रोनाल्डोले आफ्नी प्रेमिकालाई खर्चका लागि हरेक महिना १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन्छन्। एल नेसिओनलले रोनाल्डोले गर्लफ्रेन्डलाई दिने पैसालाई तलब भनेको छ।
एल नेसिओनलका अनुसार जर्जिना रोड्रिग्वेजलाई ‘छोराछोरीको हेरचाह र अन्य खर्च’का लागि प्रति महिना १ लाख युरो रकम दिइन्छ। यसअघि रोनाल्डोले प्रेमिका जर्जिनालाई अढाइ करोडको कार उपहार दिएका थिए।
रोनाल्डो र जर्जिना विलासी जीवनशैली बिताइरहेका छन्। जसको झलक जर्जिनाको सोसल मिडिया अकाउन्टमा देख्न सकिन्छ। जर्जिना र रोनाल्डो सन् २०१७ देखि सँगै छन्।
जर्जिना पेशाले मोडल हुन्। उनी धेरै ठूला ब्रान्डको विज्ञापनमा पनि देखा परेकी छिन्। इन्स्टाग्राममा उनका ३६ करोडभन्दा बढी फलोअर्स छन्। उनको हरेक तस्विरमा लाखौंले लाइक र कमेन्ट गर्छन्।
हालै जर्जिनामाथि बनेको डकुमेन्ट्री ‘आई एम जर्जिना’ मा उनको जीवनका सबै पक्षको चर्चा गरिएको थियो ।द मिरर’को रिपोर्टका अनुसार एक समय पसलमा काम गर्ने जर्जिनाको जीवन रोनाल्डोसँग जोडिएपछि पूरै परिवर्तन भयो।
जर्जिना ७५ करोडको आलिशान महलमा बस्छिन्, ९० करोडको याटमा यात्रा गर्छिन् साथै बुगाटी, रोल्स रोयस र फेरारी जस्ता लक्जरी कारहरूमा यात्रा गर्छिन्।
उनको महलमा स्विमिङ पुल, जिम र फुटबल ग्राउन्ड पनि छन् । रिपोर्टका अनुसार उनी हवाई यात्राका लागि निजी जेट प्रयोग गर्छिन्।
यो पनि पढ्नुहोस: एलियन आएर पृथ्वीकी महिलालाई गर्भवती बनाएको घटना भाईरल:विगतमा एलियन्स वा यूएफओ (उडन तश्तरी) को सम्बन्धमा धेरै अचम्मलाग्दो दाबीहरू गरिएका छन्। तर अहिले आएको दाबी अनुसार एलियनको एक महिलासँग सम्बन्ध थियो।
त्यसपछि ती महिला गर्भवती भइन् । यो चकित पार्ने दावी त्यतिबेला बाहिर आएको हो जब एक प्रतिवेदनमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले युएफओ भेटेर ‘असाधारण अनुभव’ भएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो ।
यस सम्बन्धमा रक्षा गुप्तचर एजेन्सीले पेन्टागनमा केही कागजात बुझाएको छ, जसलाई ‘द सन’ले प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदनले एलियन वा यूएफओ नजिक हुँदा देख्न सक्ने प्रभावहरू वर्णन गरिएको छ ।
यसमा मानिसहरूलाई चोट पुर्याउनेदेखि लिएर अपहरण र तिनीहरूसँग ‘सेक्स’ गर्ने घटनाहरू समावेश छन्। एक साक्षीले दावी गरे कि यूएफओले मानिसहरुसंग यौन सम्बन्ध राख्यो र एक महिलालाई पनि गर्भवती बनायो।
युएफओ र मानिसबीच पाँच पटक ‘सम्भोग’ भएको रिपोर्ट आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा अमेरिकास्थित एजेन्सी MUFON ले मानिसमा यूएफओ दृष्यको जैविक प्रभाव र तिनीहरूको आवृत्तिको बारेमा बताएको छ।
जसमा अपहरण, गर्भावस्था, यौनसम्पर्क, टेलिप्याथीको अनुभव जस्ता अनौठा घटनाहरु यूएफओको नजिक परेका मानिसहरुले अनुभव गरेको उल्लेख गरिएको छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि यूएफओ/एलियनको निकटताले मानिसहरूलाई चोट पुर्याउन सक्छ।
विकिरणले जलाउन सक्छ, मस्तिष्कमा समस्या निम्त्याउन सक्छ वा उनीहरूको स्नायुलाई असर गर्न सक्छ। यस बाहेक, साक्षीहरूको अन्य अनुभवहरू दुःस्वप्न, आवाज गुमाउनु, आँखामा चोटपटक, सास फेर्न गाह्रो हुनु र तौल घट्नु परेको थियो।